Ulive.Chat प्रसारणकर्ताहरूका लागि FAQ
हाम्रो च्याट कोठामा पैसा कमाउन तपाईलाई विशेष खाता चाहिदैन। केवल प्रसारण सुरू गर्नुहोस्, दर्शकहरू जम्मा गर्नुहोस्, र सिक्काहरू प्राप्त गर्नुहोस्।
म एजेन्सीको रूपमा कसरी दर्ता गर्न सक्छु?
मसँग कतिवटा खाताहरू छन्?
एक मात्र। प्रति प्रयोगकर्ताको प्रसारण एकाधिक खाताहरूलाई अनुमति छैन। कृपया यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले आफ्ना सबै उपकरणहरूमा एउटा खाता मात्र प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ बहु खाताहरूको लागि फ्ल्याग हुनबाट बच्न।
प्रसारण अनुभव हामीसँग प्रसारण गर्न र पैसा कमाउन आवश्यक छैन। मैत्री र आत्मविश्वासी हुनु केवल आवश्यकताहरू हुन्।
के मैले मेरो लुगा फुकाल्नु पर्छ?
होईन, हाम्रो भिडियो च्याट सेवा १२++ को दर्शकहरूको लागि डिजाइन गरिएको हो। तपाईंको दर्शकहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई कुनै ईरोटिक सबटेक्स्ट बिना शो दिनुहोस्। Ulive.Chat च्याट रूलेटमा लोकप्रिय हुन र धेरै पैसा कमाउनुहोस् केवल तपाईंको दर्शकहरूसँग च्याट गर्नुहोस् र लामो समयको लागि शट नछाड्नुहोस्।
के कुनै स्ट्रिमहरूमा कुनै नियम वा प्रतिबन्धहरू छन्?
हाम्रो दर्शकहरूले राम्रो प्रकाशको साथ राम्रो देखिने स्ट्रिमहरू मन पराउँछन्। Ulive.Chat.live दर्शकहरु १२ बर्षको हुन सक्छ, त्यसैले कृपया आफ्नो लुगा क्यामेरामा राख्नुहोस्।
तपाईंको दर्शकहरूसँग कुराकानी गर्नुहोस् र मित्रवत बन्नुहोस्।
कामुक स्ट्रिमहरू सार्वजनिक च्याट कोठाहरूमा प्रतिबन्धित छन्। तपाईंको स्ट्रिम वयस्क सेक्सनमा सारिन सकिन्छ वा अवरुद्ध।
क्यामेरामा सेक्स, डिभ्यान्ट यौन कार्यहरू (कठोर BDSM, zoophilia, pedophilia), आत्महत्या र लागूपदार्थको प्रयोग प्रचार कडा निषेधित छ। यी नियमहरूको उल्ल्घनले प्रशासनले तत्काल रोक्दछ।
मैले कुन भाषा बोल्नु पर्छ?
यो तपाइँको द्रुत अवलोकनमा निर्भर गर्दछ। अंग्रेजीबाट सुरू गर्नुहोस्; यो हाम्रो प्रयोगकर्ताहरू बीच सबै भन्दा साधारण भाषा हो। तपाईले पछि कसैलाई आफ्नो मातृभाषामा दुई वा अर्को वाक्य सिकाउन को लागी प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ यदि उनीहरू इच्छुक छन्।
के म प्रतिबन्धित थियो भने के हुन्छ?
हाम्रो प्राविधिक समर्थन टोलीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईंलाई तपाईंको प्रसारण के हो भनेर स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्न वा आईडी पठाएर तपाईंको उमेर प्रमाणित गर्न सोधिन्छ।
Ulive.Chat समर्थन सम्पर्क गर्नुहोस्
के म केवल लाइभ मोडमा मात्र काम गर्न सक्छु?
पैसा कमाउनको लागि आफ्नै प्रसारण रेकर्ड गर्नुहोस् जब तपाईं च्याट रूममा हुनुहुन्न। मुख्य मेनूमा रेकर्डि। स्विच गर्नुहोस्। रेकर्ड गरिएको प्रसारणहरू तपाईंको च्याट कोठामा भेट्न सकिन्छ।
म कसरी मेरो स्ट्रिममा दर्शकहरूलाई आकर्षित गर्दछु?
केहि नयाँ ब्रान्ड कोसिस गर्नुहोस्, तपाईंको सीप देखाउनुहोस् र, महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईंको दर्शकहरूसँग च्याट गर्नुहोस्। तपाईं आफ्नो स्ट्रिममा विवरण थप्न र प्रयोगकर्ताहरूलाई सार्वजनिक च्याट कोठामा आमन्त्रित गर्न सक्नुहुन्छ। सबै लोकप्रिय स्ट्रिमहरू स्वचालित रूपमा उच्च क्रमबद्ध हुन्छन् र अधिक दर्शकहरूलाई आकर्षित गर्दछन्।
तपाईंको स्ट्रीममा लिंक वितरण गर्नुहोस् अधिक मेहनत गर्नको लागि सामाजिक मिडिया, वेबसाइटहरू, फोरमहरू मार्फत।
म कसरी पैसा कमाउन सुरू गर्न सक्छु?
प्रसारणकर्ताहरूलाई तेस्रो-पक्ष संसाधनहरूको विज्ञापन गर्न, प्रयोगकर्ताहरूलाई आमन्त्रित गर्न वा भुक्तान प्रसारणहरूको अवधिमा तेस्रो-पक्ष भुक्तान विधिहरू प्रयोग गर्न अनुमति छैन।
तपाईंको प्रसारण अधिक दर्शकहरू, तपाईं अधिक भुक्तानी हुनेछ। अधिक पैसा बनाउन नयाँ दर्शकहरूलाई आकर्षित गर्नुहोस्!
के निजी कलहरू भुक्तान गरियो?
हो! तपाईंले अधिक दर्शकहरू प्राप्त गर्दा तपाईंले प्रसारणहरू र निजी कलहरूको लागि अधिक प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यहाँ कुनै प्रतिबन्ध वा लुकेका शुल्कहरू छैनन्।
सिक्का के हुन्? तिनीहरूले के लायक छन्?
सिक्का वेबसाइटको आन्तरिक मुद्रा हो। प्रयोगकर्ताहरूले तपाइँलाई भुक्तान गर्न, उपहारहरू खरीद गर्न, र सशुल्क लाइकहरू दिनको लागि तिनीहरूलाई खरीद गर्दछ। सिक्काको rate १ देखि coins००० सिक्काको निश्चित दर छ। मुद्रा सिक्कामा प्रदर्शित हुन्छ।
म मेरो सिक्का ब्यालेन्स कहाँ देख्न सक्छु?
तपाईंको खातामा सिक्का संख्या मुख्य मेनू माथि देखाईन्छ। गतिविधिको पूरा इतिहास तपाईको च्याट कोठामा भेट्न सकिन्छ।
न्यूनतम निकासी रकम कति छ?
हाल, १० डलर न्यूनतम निकासी रकम हो।
कति पटक म रकम फिर्ता लिन सक्छु?
हामीसँग कति पटक तपाईं पैसा फिर्ता लिन सक्नुहुनेछ त्यसमा हामीसँग कुनै प्रतिबन्ध छैन। तपाईं कुनै पनि समयमा भुक्तानी अनुरोध गर्न सक्नुहुनेछ, एकचोटि तपाईंले $ १० को न्यूनतम ब्यालेन्समा पुग्नुभयो।
फिर्ती को विधि के हो?
यस समयमा तपाईले Paypal, Payoneer, Yandex, QIWI प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
पैसा निकाल्नको लागि कति समय लाग्छ?
स्थानान्तरण सामान्यतया २- days दिन भित्र आउँछ।
के म एक प्रयोगकर्ता ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ?
तपाईं प्रयोगकर्तालाई कालोसूची गर्न सक्नुहुन्छ तिनीहरूलाई आपत्ति जनाउनबाट रोक्नको लागि। तपाईं कुनै पनि समयमा प्रयोगकर्ताहरू अनब्लक गर्न सक्नुहुन्छ।
के म एक निश्चित देशका मानिसहरूलाई मेरो स्ट्रिम हेर्नबाट रोक्न सक्छु?
हो। सेटिंग्समा एक वा धेरै देशहरू अक्षम गर्नुहोस्।
के प्रयोगकर्ताले मलाई उनीहरूको मनपर्नेमा थप्न सक्छ?
अवश्य। एक पटक प्रयोगकर्ताले तपाइँको सदस्यता लिने बित्तिकै, तिनीहरू तपाईंको अधिसूचना प्राप्त गर्दछ जब तपाईंको प्रसारण प्रत्यक्ष हुन्छ। सबै सदस्यहरूले एक विशेष मेनूमा उनीहरूको मनपर्ने प्रसारणहरू देख्दछन्।
हो, तपाईलाई गर्नु पर्ने भनेको एन्ड्रोइड वा आईओएसको लागि अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नु हो।
त्यहाँ निःशुल्क च्याट छ? के यसको भुक्तान भयो?
यदि क्यामेराले काम गरेन वा च्याट स्थिर छ भने मैले के गर्नुपर्छ?
प्रयोगका सर्तहरू गोपनीयता नीति Creator Agreement Affiliate agreement समर्थन
सामग्री निर्माता बन्नुहोस् Copywriters को लागी सम्बद्ध कार्यक्रम मोडेल एजेन्सीहरूका लागि FAQ